Migrate to Type C
My Blog, My Memo & Myanmars` Unicode
I keep all of my memos here.
By Htet Wai Aung - September 12, 2020
ခရီးသွားရင် gadget တွေ ပေါလှတဲ့ ကိုယ့်အတွက် charger တွေ သယ်ရတာ အလုပ် အတော်ရှုပ်တယ်။ ဖုန်းအတွက်၊ power bank အတွက်၊ ကင်မရာအတွက်၊ လက်ပတော့ အတွက် စသည်ဖြင့်ပေါ့။ ခု ၂၀၂၀ မှာ Type C ကို migrate လုပ်မယ်ကွာ ဆိုပြီးတော့ ပိုက်ဆံအကုန်ခံပြီး လုပ်လိုက်တယ်။ သက်သာသွားတာကတော့ charger အများကြီး သယ်ရတဲ့ ဒုက္ခက ကင်းသွားတာပဲ။ အဲ့တာနဲ့ ဒီ charger လေးကို ဝယ်ဖြစ်တယ်။ (တကယ်က လုလာတာရယ်။) ဝယ်တုန်းက order တင်လိုက်ပြီးမှ ရန်ကုန်က ထွက်ဖို့ အကြောင်းဖန်လာတော့ ကိုအေးမင်းလတ် ဆီကနေ သူသုံးနေတာကို အတင်းယူလာလိုက်တာ။ ခုသုံးနေတဲ့ laptop ၂ ခုစလုံးက Type C charging ပေါက်တွေဆိုတော့ 65Watt အထိပေးနိုင်တဲ့ charger ဆိုတော့ အသာလေး အဆင်ပြေတယ်။ အားသွင်းရင် ပူတာ ဘာညာ မရှိဘူး။ ဆိုဒ်ကလည်း compact လေးဆိုတော့ ကျွန်တော့်အကြိုက်ပဲ။ ဖုန်းကလည်း 18Watt နဲ့ရတယ်ဆိုတော့ ဖုန်းအတွက်လည်း ဒီ charger ပဲ။ ကင်မရာကလည်း Type C နဲ့ဆိုတော့ ကင်မရာ အားသွင်းလည်း ဒီ charger ပဲ။ Power bank, Bluetooth Speaker ကလည်း Type C နဲ့ဟာပဲ အစကတည်းက ရွေးဝယ်ထားတော့ သူတို့အတွက်လည်း အတော် အဆင်ပြေတယ်။ ဘာ လာလာ ဒေါင်းတယ်ပေါ့ဗျာ။ ဈေးကတော့ ကျွန်တော် ဝယ်တုန်းက ၂ သောင်း ၂ ထောင် တဲ့။ ဘယ်မှာရောင်းလဲတော့ ကျွန်တော်လည်းမသိဘူး။ တရုတ်ပြည်က လူကြုံနဲ့ ကိုအေးမင်းလတ် ဝယ်ပေးလို့ ကျွန်တော်လည်း ရတာ။
MacOS Myanmar Unicode Keyboard
By Htet Wai Aung - December 10, 2020
MacOS မှာ ဘယ်တုန်းက ပါလာမှန်းတော့ မသိဘူး။ အစက keymagic နဲ့ပဲ မြန်မာစာကို ရိုက်နေတာ။ သဝေထိုးကို ရှေ့က ရိုက်တာ အကျင့်ပါနေလို့။ ခုကျ ubuntu မှာ messenger က chrominium based ဆိုတော့ သဝေထိုးရှေ့က ရိုက်ရင် bug ပါပြီး ရိုက်မရဖြစ်နေတာနဲ့ default keyboard ကို သုံးရပြန်ရော။ ခုမှ သတိရလို့ Mac မှာပြန်ကြည့်တော့ mac မှာ မြန်မာစာအတွက် ကီးဘုတ်က ၂ ခုပါတာပဲ။ တခုက ရိုက်နေကျ myanmar3layout နဲ့ နောက်တခုက ဘာကြီးလဲကို မသိတာ။ စာလုံးတွေက တနေရာစီ။ အဲ့တော့ default myanmar3layout keyboard နဲ့ ဆိုတော့ keymagic တောင် ထည့်စရာမလိုတော့ဘူး။ သဝေထိုးကို နောက်မှ ရိုက်တာကလည်း အသားကျနေပြီးသား။ System preferences > keyboard > input source ကနေ + ကို နှိပ် Burmese ကို ရွေး ။အပေါ်က Myanmar ကို ရွေး။ ရပြီ။ P.S- Catalina နဲ့ BigSur မှာတော့ ရတယ်။ ကျန်တဲ့ အဟောင်းတွေတော့ မသိဘူး။
Typing Tutor For Myanmar Unicode
By Htet Wai Aung - August 10, 2016
မြန်မာယူနီကုဒ်အတွက် စာရိုက်လေ့ကျင့်ဖို့ software ပါ။ http://www.rapidtyping.com/downloads.html အောက်ကlink က ကိုထွန်းထွန်းနိုင် လုပ်ထားတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းဖိုင်ပါ https://drive.google.com/file/d/0Bzb1JrfPDj1eWHJjcUdiNXJpdDg/view
Oppo ဖုန်းများတွင် Unicode ပြောင်းပုံ
By Htet Wai Aung - October 12, 2019
Oppo Ufont ကို အရင်ဆုံး Download လုပ်ပါ။ Click here to download 1. Download 2. Download 3. Download Color OS6နှင့်အထက်ဖုန်းများတွင် 1. Setting / Languages and regions / Regions,တွင် Myanmar ပြောင်းပါ။ 2. Display & Brightness / Support Dai Characters, ကို ဖွင့်ပေးပါ။ Color OS 5.2 ဖုန်းများတွင် 1. Install Font App ကို install လုပ်ပါ။ 2.App ကို Change font ကိုနှိပ်ပြီး နှစ်သက်ရာ font ကို apply လုပ်ပါ။ ____________________________________________
Disable Gate Keeper on MacOS
Covid19 ရက်စွဲများ (၂)
FBB မှ inmarsat သို့